Imigomo ye-TheOneSpy nesimo sokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuqapha i-TOS ngokomthetho
Ikhaya Imigomo Nemibandela
Ngokuthenga nokulanda isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy, umsebenzisi wokugcina uyavuma lokhu okulandelayo:
Ngeke asebenzise imisebenzi yesevisi yeTheOneSpy ephikisana nemithetho ye-federal kanye neyezwe
Ngeke ishintshe imisebenzi ye-TheOneSpy yesofthiwe yesicelo nokusetshenziswa okuphathelene nezici zokuphepha zesofthiwe yesicelo seTheOneSpy. Lokhu kungashintsha isheke lesicelo ngokungavumeli ukukopishwa kwanoma yikuphi okuqukethwe ngokusebenzisa isevisi ye-TheOneSpy noma ukuphazamisa ukusebenza ngokufaka imingcele ethile ekusetshenzisweni kwesofthiwe yesicelo.
Akuthinti kabi uhlelo lokusebenza njengokudala ama-virus ukulimaza ukusebenza kwesofthiwe yesicelo se-TheOneSpy ngokujwayelekile noma kuthinta enye isipiliyoni se-software yomsebenzisi we-TheOneSpy.
Akuthumeli, kugcina, ukuthumela, ukuthumela noma ukusabalalisa noma iyiphi idatha engaphezu kwamalungelo obunikazi noma noma yimaphi amalungelo eproducti ehlakaniphile ahlobene nesofthiwe yesicelo se-TheOneSpy
Awusebenzisi isikhombikubona esizenzekelayo ekufinyeleleni isofthiwe yesicelo seTheOneSpy ekuzuzeni komsebenzisi wokugcina ngaphandle kwemvume yethu ecacile. Umsebenzisi wokuphela akufanele futhi asebenzise inguqulo eguquliwe yesofthiwe yohlelo lokusebenza engabandakanya (kodwa engagciniwe) ukuthola ukufinyelela okungagunyaziwe noma ukulawula isevisi ye-TheOneSpy.
Ungathengisi noma ukudlulisela i-akhawunti yakho yesevisi yeTheOneSpy komunye umuntu noma unikeze ukufinyelela kulowo wesithathu.
Amakhasimende alandela njalo futhi kumele alalele izimo eziphathelene ukukhokha nokubuyisela imali.
Ungalokothi ulande, ufake futhi usebenze isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy kumakhalekhukhwini ongawenzi njalo ngaphandle kwemvume efanele ephepheni evela enhlanganweni ethintekile.
Gwema ngokuqinile ukuphulwa komthetho, imithetho yesifundazwe noma yasekhaya ezweni lakini
Ukuvinjelwa kokuthola idatha kusuka kumakhalekhukhwini usebenzisa isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy engeyona yomsebenzisi wokuphela noma engekho imvume ebhaliwe evela kumnikazi wedivayisi ethile.
I TheOneSpy isofthiwe isicelo kanye noma imaphi amasevisi lapha ilungelo sokuqeda noma sokumisa okwesikhashana ukufinyelela sika umsebenzisi ngaphandle kwesaziso ngenxa futhi yiluphi uhlobo of icala Attached esekelwe a) ukuqonda TheOneSpy inkonzo sika ukuthi aphula oqondile yanoma yiziphi lekhontile we isivumelwano, b) Inkolelo yeTheOneSpy ukuthi uhlose futhi uphuluke njalo ngamalungelo omhlaba wengqondo obhekene nesofthiwe yesicelo ngokujwayelekile noma ngokuphathelene nalabo abathintekile, c) bekungasebenzi kakhulu ngokuqondene nezinsizakalo ze-TheOneSpy noma d) abakhokhi imali ekhokhwayo ekhokhwayo. Ngaphezu kwalokho, lezi zisekela kunoma yiziphi ezinye izixazululo ukuthi isevisi ye-TheOneSpy ingaba khona ngenxa yezizathu zomthetho noma zokulingana.
IMMUNITY / INDEMNIFICATION
Lapha uyavuma yini ukuvikela TheOneSpy isevisi kanye nalabo abasemaqenjini ke nganoma iyiphi indlela kusuka) icala lomthetho efana kumangala, umonakalo, njll, kanye nganoma yiziphi izimali ezivukayo zikhokhelwe ummeli Esimweni esinjalo, b) uma kwenzeka uphula ilungelo lomunye umuntu noma iqembu elihlobene, noma c) ukuhluleka ukugcina imigomo yalesi Sivumelwano nawe. Ezimweni ezinjalo, lapho isevisi yeTheOneSpy iqala ukuzivikela ngenxa yayo, uyavumelana ukunikeza ukusekela okugcwele kuleso sizathu.
NGOKUHLOBENE UHLAKA okusemthethweni okusebenza, THEONESPY SERVICE kanye nalabo kwenyunyana BAYO (HHAYI KUPHELA) INTUTHUKO nokugeleza kwegazi, NGEKE banomthwalo wemfanelo bedlala YILUPHI IFOMU EZIKHETHEKILE ingajezisa, NGEPHUTHA, KANYE IYIPHI INHLAWULO ezinje NGOKUHLOBENE YAKHO UKUPHILA KOKUSEBENZISA ISOFLWARE SOKUFAKA ISICELO SOKUPHAKATHI, NGAPHAMBILI UKUSEBENZISWA KWENKONZO YOKUSEBENZISWA KWEZINHLOKO ZOKUPHATHISWA KWEZIMALI. NOKHO, kwase kuyisikhashana ubukhulu ICALA KUKONKE UKUTHI THEONESPY SERVICE ukweleta ubungeke PHEZU INANI: A) INANI TOTAL Ukhokha zokufinyelela THEONESPY SERVICE FOR ENKATHINI 12 IZINYANGA NGAPHAMBI CLIAM YAKHO ZOKUQALA NOMA, B) A INANI OF 1000 DOLLARS. IMIGOMO YONKE YOKUPHUMA UKUPHILA KWESIBILI KOMBILI KUKHULU.
IZILUNGELO ZENKONZO YEZEMPILO
Insizakalo ye-TheOneSpy, kanye nawo wonke okuqukethwe okungeziwe kanye nokunye okubandakanya (kodwa kungagciniwe) izimpawu zokuthengisa, amalungelo okukopisha, izibuko, ikhodi, njll bangaphansi kobunikazi bodwa be-TheOneSpy service kanye namaqembu ahlangene nawo. Umsebenzisi wokuphela ubophezeleke kuphela ukusebenzisa isofthiwe yesicelo ngendlela ehlanganiswa ngokucacile kwilayisensi yabo ethengiwe futhi umsebenzisi wokugcina uvumelanise ukunamathela kulowo mkhawulo.
Njengomsebenzisi we-TheOneSpy isevisi uyavuma ukuthi ngeke: a) zama ukukhiqiza isofthiwe yesicelo seTheOneSpy nganoma iyiphi indlela; b) ushintshe isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy nganoma iyiphi indlela ukuze uvumelane nezidingo zakho; c) kuthinta ukusebenza okwamanje kanye nezici zesofthiwe yesicelo seTheOneSpy; d) uphinde uguqule isofthiwe yesicelo noma ufinyelele ikhodi yomthombo wesicelo; e) ukuboleka imali, ukuthengisa, ukuqasha isofthiwe yesicelo seTheOneSpy kwenye ingxenye; f) ukuthengisa ukusetshenziswa kwesofthiwe yesicelo seTheOneSpy futhi uzobeka kuphela isofthiwe yesicelo seTheOneSpy yokusebenzisa izidingo zakho njengesivumelwano ngasinye nomthetho; g) ushintshe noma yikuphi okuqukethwe okufana no (kodwa kungagciniwe) okushicilelwe, i-logo noma enye into evelayo yesofthiwe yesicelo se-TheOneSpy kanye nanoma iyiphi enye isofthiwe esetshenziswa ngokuhlanganyela nesofthiwe yesicelo seTheOneSpy.
Isofthiwe yesicelo se-TheOneSpy ivumela umsebenzisi inkululeko ephelele yokulayisha idatha yomsebenzisi engagcinwa, igcinwe, yabelwe futhi / noma ishicilelwe ngumsebenzisi wokuphela. Kodwa-ke, kucatshangwa ngokuqiniseka ukuthi umsebenzisi wokugcina uzokwenza lokho ngokuvumelana nesimiso sokusebenza kanye nomthetho osebenzayo. Umsebenzisi wokuphela uzothatha imithwalo yemfanelo ngokugcwele yedatha yakhe kanye nezingozi ezithintekayo zokugcina nokudluliswa kwedatha.
Isevisi ye-TheneneSpy ngeke iphathwe ngokuphathelene nanoma iyiphi indlela ngokuqondene nedatha eyabelwe ngumsebenzisi wokuphela noma uma kwenzeka idatha ihlolwe uma sinesizathu sokukholelwa ukuthi senziwa ngendlela engafanele noma ngokumelene nomthetho. Ngaphezu kwalokho, i-TheOneSpy ayisekeli noma ayilawule ikhwalithi yedatha elayishwa ngumsebenzisi wokuphela. Ngaphezu kwalokho, sinesizathu esihle sokuvimbela umsebenzisi wokugcina ekulayisheni idatha noma ukususa ngokuphelele ngesizathu esibonakalayo esifanelekile kunoma yisiphi isikhathi esinikeziwe.
Isevisi ye-TheOneSpy ingasebenzisa futhi idatha oyithumeleyo ukucacisa indawo yakho, eyaziwa nangokuthi Idatha yomsebenzisi. Isenzo sokulanda, ukuthenga ukubhalisa kwesofthiwe yesicelo se-TheOneSpy wena uyavuma ngakho konke lokhu ngenhla mayelana nemibandela ebekwe kusigaba sethu sobumfihlo. Isevisi ye-TheOneSpy ayinaso isiqiniseko noma isimangalisa ukuqinisekisa ukuthi kunembile kangakanani, ephelele futhi ngesikhathi esifanele ukuthi Idatha Indawo izoba.
IZINHLELO ZOKUPHAKATHI NOKUQALA
Imigomo Yesevisi kanye nezindlela zokusebenzisa izinto zingase zenze izinguquko ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, zonke izinguquko ezinjalo zizothunyelwa kwiwebhusayithi ye-TheOneSpy yesevisi futhi umsebenzisi wokugcina uzobophezela ukuhambisana nalezo zinguquko uma nje esasebenzisa isofthiwe yesicelo seTheOneSpy.
IMITHETHO YOKUHLAWULWA KANYE UKUKHENZISWA KWE-SUBSCRIPTION
Isevisi ye-TheOneSpy ithengwe ngokubhaliselwe. Esikhathini ongathanda ukuthenga ngalo ukubhalisa kuzodingeka ukhokhe ngekhadi lakho lesikweletu. Kuye ngohlobo nobunikazi bephakheji yokubhalisa oyikhethayo, Sinikeza inkokhelo yangesikhathi esisodwa ukuze ubhalisele isikhathi esifisa. Isikhathi singashintsha kuye ngokuthi ikhasimende likhethiwe. Ikhasimende kufanele livuselele le nsizakalo ngesandla ngemuva kokuqedwa kwesikhathi sokubhalisa. Ithimba lethu liqinisekisa ukuthi inqubo yokuvuselela ilula futhi kulula. Konke okudingeka ukwenze kufaka ikhodi ye-3D ukuqedela inqubo yokukhokha emva kokubhaliselwa kwakho kwamanje kuzovuselelwa ngokushesha. Ngamanye amazwi, awudingi ukufaka noma ukulanda isevisi ukuvuselela ukubhalisa. Ikhasimende linelungelo lokukhansela ukubhalisa noma kunini. Kodwa-ke, asibuyiseli ukubuyiselwa kwemali noma ukubuyisela inkokhelo yenkonzo kulokhu. Uma ususebenze ukubhalisa, asikho icala lokubuyiselwa inkokhelo noma ngabe uyikhansela ngaphambi kokufinyelela ekuqedeni.